Fampiharana mozika tsara indrindra (Maimaimpoana sy karama) - Android sy iOS - App
Ny fihainoana ny mozika ankafizinao eo am-piasana dia mety hanatsara ny toetranao sy ny vokatrao koa. Mampitony anao haingana izany ary esorinao tsy ho ao an-tsainao ny adin-tsaina, ary manatsara ny fifantohanao. Na ho ahy koa aza, ny mozika any am-piasana no mpiara-miasa malaza indrindra amiko.
Raha izany, raha tianao kokoa ny mihaino mozika, ity misy andiana fampiharana mozika maimaimpoana manampy anao hahita mozika tsara indrindra amin'ny fotoana iray. Ka inona no andrasanao? Andao hojerentsika ireo fampiharana mozika maimaimpoana ireo.
ankehitriny Midira amin'ny mozika tsy voasakana avy amin'ny Schools & Colleges miaraka amin'ny mpitari-dalana anay.
Lisitry ny fampiharana mozika maimaim-poana tsara indrindra:
Amin'ity indray mitoraka ity alohan'ny handrafetanao ny lisitry ny mozikao sy hihainoana ireo hira dia tandremo kely ireo fampiharana mozika maimaimpoana izay manampy anao handefa mozika mivantana. Noho izany, andao hanomboka!
Zara raha misy olona izao tsy mbola nandre momba ny Spotify. Afaka milalao hira amin'ny Internet ianao ary mihaino ny làlan'ny mozika tianao amin'ny fotoana rehetra, na any amin'ny toeram-piasana na gym. Manolotra kinova andrana maimaimpoana mandritra ny telopolo andro ny fampiharana ary manome anao hira mihoatra ny 30 tapitrisa avy amin'ny mpanakanto samihafa manerantany.
Ambonin'izany dia azonao atao ny mamorona ny lisitry ny lisitry ny safidinao na ny lisitra izay safidin'ny ankamaroan'ny olona mifototra amin'ny toetranao. Ohatra, raha tianao ny hira romantika dia tsindrio ny lalan'ny hira romantika; mandeha ho azy, dia hahazo ny lalana ianao. Na dia tsy afaka amin'ny doka aza ny kinova maimaim-poana, dia tsara kokoa ny manana sy mankafy ny mozika maimaim-poana.
Midira ho an'ny Discount ho an'ny mpianatra Spotify
Google Play dia eo amin'ny laharana faharoa amin'ny lisitry ny fampiharana mozika maimaimpoana ho anay. Azonao atao ny mihaino eto ny làlan'ny mozika ankafizin'ireo mpanakanto mozika tianao maimaimpoana. Ny tsara indrindra dia Google Play mamela anao hanamboatra ny safidinao sy hampakatra ny mozikao ary tsy misy doka.
Na ianao aza dia afaka mampakatra hatramin'ny 50 000 ny hira miaraka amin'ireo lalan'ny mozika natolotry Google Play. Noho izany, raha te hanana làlana namboarina ianao ary te hihaino azy an-tserasera, dia afaka mandefa mozika ianao amin'ny fotoana rehetra amin'ny fampidinana azy io maimaim-poana amin'ny fampiharana ity.
Mety efa nandre momba an'i Pandora daholo ianareo. Eny, io rindrambaiko mozika maimaimpoana io dia mitovy tanteraka amin'ny fisehoan'ny radio Spotify, na azontsika lazaina ireo mpifaninana roa lehibe indrindra amin'ny fampiharana mozika eny an-tsena. Pandora koa dia manolotra streaming mozika maimaim-poana, fa mamela anao hisafidy ny gara miorina amin'ny safidinao ary hahita mozika vaovao maimaim-poana.
Tsy toy ny Spotify, mandahatra mozika maimaim-poana izy ireo ary manana kinova premium ihany koa. Mety mahatsikaritra doka mampihetsi-po ianao ao amin'ny kinova fampiharana mozika maimaim-poana, saingy tsy maninona izany raha mihaino maimaimpoana ireo hira tianao indrindra.
Fampiharana malaza iray hafa izay mamela anao hihaino mozika maimaim-poana dia Amazon. Mitovy amin'ny Google Play, ity fampiharana ity dia manome anao làlana hanatsara ny safidinao ary hanangona ny lisitra amin'ny alàlan'ny fanamarinana ireo hira hitanao betsaka indrindra avy amin'ny lisitr'ireo rakikira sy mpanakanto.
Ankoatr'izay, manome anao fidirana hampakatra hira 250 eo ho eo izy io ary handrindrana izany amin'ny fitaovanao. Ankoatr'izay, ny fampiharana mozika dia mora idirana, manana interface tsara, ary miasa amin'ny fitaovana isan-karazany amin'ny fomba mahomby.
Midira ho an'ny Discount Prime Music Student
Ho avy manaraka ao amin'ny lisitry ny fampiharana mozika maimaim-poana dia Slacker Radio. Ity fampiharana mozika maimaimpoana ity dia ahafahanao misafidy karazan-kira ankafizinao sy ahafahanao mihaino ireo onjam-peo mivantana alohan'ny fandaharana.
Azonao atao ny mamorona ny lisitry ny mozika, misafidy onjam-peo ary mitazona ny lalanao hira tianao indrindra eo ambonin'ilay lisitra mba hamerenany azy io hiverina.
Na dia rindrambaiko mozika maimaimpoana aza i SoundCloud, dia manana foto-kevitra tsy manam-paharoa satria mitovy amin'ny tamba-jotra sosialy ho an'ny mozika izany. Ireo DJ sy ireo mpitia mozika dia afaka mampakatra ny mozika, podcast, ary ny mozika noforoniny teto maimaim-poana.
Ankoatr'izay, azonao atao ny manamboatra ny lisitry ny mozikao koa.
Rindrambaiko mozika maimaimpoana ny Future FM. Manome sehatra anao amin'ny fandefasana ireo mix DJ ireo avy amin'ny clubclub, seta mivantana, kaonseritra ary mozika festival. Ny hevitra voalohany nanombohana ity fampiharana ity dia ny famoahana atiny DJ avy amin'ireo DJ malaza eran-tany.
Fa ankehitriny kosa dia mijoro ho fampiharana mozika maimaimpoana hafa izay miavaka amin'ny fonosana izy ary manome anao traikefa mozika tokana. Na izany aza, mety tsy ho mozika mety ho an'ny birao tsirairay io, fa tena hitendry mozika mahafinaritra amin'ny fotoana malalaka anananao.
TuneIn dia rindrambaiko mozika maimaimpoana hafa izay azonao atao sy mihaino hira amin'ny onjam-peo eo an-toerana. Ankoatr'izay, manome anao safidy fitahiry ianao, izay endri-javatra mahavariana indrindra amin'ity app ity. Amin'ny fampiasana an'io endri-javatra io dia azonao atao ny mamonjy ny mozika farany henoinao hahitanao azy amin'ny manaraka.
Ankoatra izany, azonao atao koa ny mampiditra ny hira, ny anaran'ny mpanakanto na ny karazana ary alao ny lisitr'ireo onjam-peo rehetra ahafahana milalao ilay hira.
Ity fampiharana mozika maimaimpoana ity dia manana ny interface mivantana mahitsy izay mamela anao hamorona ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny horonantsary SoundCloud, horonan-tsary YouTube. Afaka mikaroka haingana ny mozika amin'ny alàlan'ny karazana ianao ary mihaino ireo hira efa niova koa. Na dia kinova tohanan'ny doka aza izy io, mamela anao hamorona lisitry ny hira tsy voafetra hihainoana ny làlana tianao indrindra ianao.
Angamba ny 9tracks dia fampiharana radio maimaim-poana, saingy mamela anao hihaino ny fifangaroan-doka tsy misy doka an'ny hira izany. Azonao atao ny mahita eto ireo fifangaroan'ny fironana, hira malaza, safidin'ny mpiasa, ary maro hafa.
Ankoatr'izay, azonao atao ny mijery ny hira tianao indrindra amin'ny fikarohana ny hira, ny karazana, ny mpanakanto, ary mazava ho azy, ny fihetseham-ponao koa.
Q dia iray amin'ireo fampiharana fizarana mozika tsara indrindra mamela anao hametraka ny mozika 'Q' avy amin'ny YouTube sy Spotify. Ankoatr'izay, afaka miara-miasa amin'ny lisitry ny playlist miaraka amin'ny mpiara-miasa sy ny namanao ianao.
Fomba tsara indrindra avela ny olona mankafy ny mozika tiany indrindra.
Ka antenaiko fa nankafizinao ny lisitry ny fampiharana mozika maimaimpoana ho anay. Amin'ny manaraka, isaky ny mahavoa anao ny volanao amin'ny mitataovovonana dia ataovy izay hihainoana ny làlan'ny mozika tianao amin'ireo fampiharana mozika maimaimpoana ireo.
Headphones tsara indrindra hijerena sarimihetsika
The Silent Sea Season 2: Daty Famotsorana: Cast, Plot ary Izay rehetra tokony ho fantatrao ao amin'ny Netflix
Calvin Ridley Net Worth - Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More!
izay kissanime no tena izy
tranokala folo ambony hijerena sarimihetsika maimaim-poana
roblox ny fomba hahazoana zavatra maimaim-poana
mp3 fantsona mp3 mankany youtube
ny fomba ahazoana sarimihetsika youtube maimaim-poana
ahoana no hijeranao sarimihetsika maimaim-poana